अन्तर्वार्ता: चीन एमसीसी पास भएकोमा चिन्तित रहेछ- देव गुरुङ
२०७८ चैत १८ शुक्रबार
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ चीन भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएका छन् । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट पास भएको दुई महिनापछि उनी चीन गएका थिए । २०७४ मा एकता भएको कम्युनिस्ट पार्टीहरू छिन्नभिन्न भएको तथा एमालेविरुद्ध माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससहितका दलसँग निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति भएका बेला गुरुङको चीन भ्रमणलाई लिएर चासो बढेको हो । नेता गुरुङसँग नेपाल मामिलामा चीनको चासो, चिन्तासँगै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकतालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
चीन भ्रमण कस्तो रह्यो ?
चीन भ्रमण मूलभूत रूपमा राम्रो रह्यो । ‘चाइना फाउन्डेस फर पिस एन्ड डेभलपमेन्ट’ भन्ने संस्थाको आमन्त्रणमा म गएको थिएँ । एउटा अन्तरक्रियाको आयोजना भयो । अन्तरक्रियाको मूल विषयवस्तु शान्ति र विकासका लागि जोड दिनुपर्छ भन्ने थियो । कोभिड महामारीको समयमा शान्ति र विकासको प्रक्रियामा अवरोध पैदा भयो, अब सबै मिलेर कोभिड नियन्त्रण गर्ने क्रममा छ भन्ने कुरा भयो ।
नेपाल मामिलामा चीनले धेरै नै चासो देखाएको भन्ने चर्चा छ नि ?
अमेरिकाले ‘इन्डो प्यासिफिक’ (हिन्द-प्रशान्त) क्षेत्रमा रणनीतिक अभियान सुरू गरिराखेको छ । त्यसले यस क्षेत्रको शान्ति र विकासमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ, द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने खतरा छ । परिणामतः असुरक्षा र अशान्ति निम्तिन सक्ने भन्दै चीनले चिन्ता व्यक्त गर्‍यो । एमसीसीमा मुख्य चासो रह्यो ।
आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी)ले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा यहाँको शान्ति सुरक्षा, विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा युद्ध आतंक खडा गरेर शान्ति र विकासलाई अवरुद्ध पार्न सक्ने खतरा चाहिँ छ भन्ने पनि चीनको चिन्ता रहेछ ।
बिहान-दिउँसो-साँझ खानपिन र चियापानको समयमा अनौपचारिक कुरा सुन्दा आईपीएसको एउटा अंग एमसीसी पास गर्ने÷नगर्ने तपाईंहरूकै कुरा रह्यो । तर, पास गर्दा आईपीएसको लागि बाटो खुल्यो । अब, १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले रोक्ने त देखिन्छ । तर, १२ बुँदे सम्झौतालाई अमेरिकाले मान्ने सम्भावना देखिँदैन । किनभने अमेरिकाले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई उल्लंघन गरिरहेको छ ।
भनेपछि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ अमेरिकाले मान्ला कि नमान्ला ? प्रश्नवाचक चिह्न छ । त्यो स्थितिमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले आईपीएसको हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्छ कि सक्दैन ? यसमा चीनको चिन्ता पाइयो ।
उसो भए चीन एमसीसी पास भएकोमा चिन्तित रहेछ होइन ?
उम्...पारित भएकोमा खुसी देखिँदैन ।
तपाईं चीन भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा थिए । तपाईंभन्दा पहिले एमाले नेता विष्णु पौडेल चीन भ्रमणमा हुनुुहुन्थ्यो । दुई देशका कम्युनिस्ट नेताहरूको भ्रमण एकपछि अर्को हुनुलाई के फेरि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ?
विष्णु पौडेलजीको चीन भ्रमणबारे त हामीलाई जानकारी भएन । तर, यहाँ (नेपाल) आएपछि थाहा भयो कि उहाँ चार÷पाँच दिन अगाडि नै गएर आउनु भएछ । मेरो उहाँहरूसँग भेटघाट भएको पनि होइन । कुराकानी भएको पनि होइन । कुनै अन्तर्सम्बन्ध थिएन ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी)ले त नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलून्, सहकार्य गरून् भन्ने कुरा त कुनै नयाँ नौलो विषय होइन । यो पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा न हो ।
नेपालमा वामपन्थी दलहरू मिल्दा राम्रो हुन्छ, सहकार्य गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सदाशय चीनको नयाँ होइन नि । त्यसकारण मूल कुरा आईपीएसको हस्तक्षेप कसरी रोक्न सकिन्छ ? रोक्ने उपायहरू के–के हुन सक्छन् ? जसले नेपालको स्वाधीनताको रक्षा हुन्छ ? यही प्रश्नहरूमा चीनको चासो हो ।
स्थानीय निर्वाचनबारे चीनको सल्लाह कस्तो रह्यो ?
त्यो त अब एक देशको कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को देशको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई निर्वाचनमा सहकार्य गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा नै भयो । मिल्ने÷नमिल्ने कुरा त नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मामिला न भयो ।
द्वन्द्वकालीन घटनामा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत आकर्षित हुँदैन- सांसद गुरुङ
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले माओवादी द्वन्द्वकालीन घटनामा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत आकर्षित हुन नसक्ने बताएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले द्वन्द्वकालीन विषय राष्ट्रिय मुद्दा रहेको र यसलाई राष्ट्रिय स्तरमै
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ चीन भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएका छन् । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट पास भएको दुई महिनापछि उनी चीन गएका थिए । २०७४
राजनीतिक दुर्घटना नभए सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म जान्छ- देव गुरुङ
काठमाडौं । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता नेता देव गुरुङले राजनीतिक दुर्घटना नभए सत्ता गठबन्धन चुनावसम्मै जान सक्ने बताएका छन् । बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनको विषयमा पनि गठबन्धनको हालसम्मको समीक्षा र
कांग्रेसले गठबन्धनभित्र छलफल नगरी एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्‍यो- देव गुरुङ
काठमाडौं । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संशोधन र परिमार्जनविना यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा उनले गठबन्धनभित्र